Warbixin:- Shanta Horyaal Ee Ugu Waa Weyn Qaarada Yurub Iyo Kooxaha Kala Hantay Iyo Kuwa La Sugaayo? | Malcab.com Wararka Ciyaaraha
Waxay ahayd hordhac saadaalin ah muddo bilooyin ah laakiin Khamiista, Liverpool ayaa ku guuleysatay horyaalnimada Premier League.
Jurgen Klopp’s Reds ayaa ah horyaalkii ugu sarreeyay England markii ugu horeysay muddo seddex sano ah ka dib markii ay u hanqal taagayeen hanashada koobkaan 2019-20.
Iyada oo la soo gabagabeynayo koobka iyada oo la ciyaaray 7 kulan oo loo mahadcelinayo guuldaradii Man City ee ka soo gaadhay Chelsea Khamiistii shalay, Liverpool ayaa dhigtay rikoodh ah kooxdii ugu horeysay ee Ingariis ah ee ku guuleysata horyaalka ugu sareysa.
Laakiin sidee tan u barbar dhigeysaa diiwaanada shanta horyaal ee ugu waa weyn Yurub? waxaan ku eegaynaa warbixintan hoos ku xusan.
Shaqada Horyaalka Premier League “Xidigaha Gudaha Ee Xuduudaha”
Labo sano ka hor Pep Guardiola’s City waxa uu ku guuleysatay Premier League iyadoo shan kulan ay ka harsan tahay, taasoo la siman rikoorkii ugu sareeyay ee Ingariiska ah ee Manchester United (1907-08 iyo 2000-01) iyo Everton (1984-85) ayaa hore wadaagayay.
Laakiin Liverpool, oo ku dhameysatay kaalinta afaraad markii City ay ku guuleysatay horyaalkan 100 dhibcood, ayaa baabi’iyay sumcada xilli ciyaareedkan.
Reds ayaa kaliya labo dhibcood hoos uga dhacday 27-kii kulan ee furitaanka waxayna iska ilaalisay guuldaro ilaa maalinta ugu dambeysa ee bisha Febraayo.
Daqiiqadii 1.aad Ee Kooxda PSG 2015-16?
Ma ahan wax layaab leh in PSG ay liiskan ku soo muuqato iyadoo ay ku dheehan tahay awooda kubada cagta Faransiiska.
Kani wuxuu ahaa guushoodii afaraad oo isku xigta waxaana la shaabadeeyay 62 maalmood ka hor dhamaadka xilli ciyaareedka 13ka Maarso markaasoo ay 9-0 ku garaaceen Troyes, oo ah guushii ugu weyneyd ee marti ah taariikhda.
PSG ayaa soo gabagabeysay 31 dhibcood oo nadiif ah oo ay ka heshay Lyon iyo Monaco, waxaana ay heysteen farqiga goolasha ugu dambeeya oo ah +83.
Horyaalka Bundesliga Kooxda Bayern Munich 2013-14?
Sideed ula socotaa xilli ciyaareed guulo badan markii aad tababare cusub tahay horyaal aan caan aheyn? Adigoo ku duulaya cinwaanka rikoorka qaab qoraal ah.
Markii la eego kooxdii Jupp Heynckes ee koobkii wada qaaday ee xilli ciyaareedkii 2012-13, Bayern wax guuldaro ah kama aysan gaarin guuldaradii ka soo gaartay markii tababarihiisii ​​hore ee Barcelona Guardiola uu qabtay 25kii Maarso, waxaa loo xaqiijiyay inay yihiin horyaalnimada Bundesliga markii 24aad.
Waxay aheyd ciyaartii 52aad ee Bayern ee aan wax guuldaro ah la kulmin, inkasta oo kooxda aan laga adkaan ee Guardiola ay hal dhibic ka heshay seddexdii kulan ee soo socota ee Bundesliga isla markaana ay ka hartay Champions League semi-finalka.
Horyaalka Serie A Yaa Hantay Hadaba Horyaalkaasi?
Juventus ayaa fursad u heshay inay hantaan rikoorkaan xilli ciyaareedkii hore laakiin guuldaradii lama filaanka aheyd ee 2-1 ka soo gaartay kooxda SPAL – waa guuldaradoodii labaad ee shan ka mid ah – taasoo ka dhigtay inay seegaan fursadii.
Guushan cinwaanka ah waxa ay aheyd Abril 20-keedii markii ay garoonkeeda kula ciyaareen Fiorentina – ciyaartii ugu dambeysay ee Juve ay guuleysatay xilli ciyaareedkaas – waxayna la micno tahay inay rikoorkaas la wadaageen kooxda Inter ee Roberto Mancini.
Iyada oo ay kooxda Juventus u laabatay ka hor xilli ciyaareedkii la soo dhaafay fadeexadii Calciopoli, ma jirin koox la tartami kara oo ay la tartameen Inter Milan 2006-07 oo kaliya hal jeer ayey guuldarro ka soo gaartay, iyadoo horyaalka ku qaaday 22 dhibcood.
Horyaalka La Liga?
Waxaa laga yaabaa inay jireen dhowr horyaal oo horyaal ah oo Yurub ah laakiin kooxaha Clasico ee ay xafiiltamaan ee Madrid iyo Barca sida caadiga ah midba midka kale wuu ku dhawaanayaa.
Alfredo Di Stefano iyo Ferenc Puskas ayaa kaalin ka qaatay ololeyaashii ugu adkaa ee Madrid horraantii 1960-meeyadii.
Barcelona ayaa kaalin muhiim ah ka laheyd midkood ‘tartan hanashada’ markaas, laakiin waxaay caado ka qaateen olole ka baxsan Madrid 1973-74, markaasoo Los Blancos ay ku dhameysatay kaalinta sideedaad.